Nezvedu - Shenzhen Langxin Electron Co., Ltd.
Shenzhen Langxin Electron Co., Ltd. ndiye mugadziri nyanzvi mukutsvaga uye kugadzirwa kwesimba kwedhijitari signage uye yekuzvishandira kiosk kubvira 2004 gore.
Iko kune yakajairwa chigadzirwa digital signage iyo inoshandiswa sekushambadzira kuratidza.
Dynamic dhijitari inoratidza inokutendera iwe kuratidzira zvigadzirwa zvako, masevhisi uye kukwidziridzwa, kwaunoda, kana iwe uchida.
Zvakare zvekuzvishandira ma kiosks akagadzirwa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Zvichienderana nebasa rinodiwa, rinogona kuverengerwa pamwe nezvinhu zvakaita sebarcode scanner, thermal printa, A4 printer, IC kadhi kuverenga, NFC kadhi kuverenga, kadhi dispenser, ruoko sanitizer dispenser, webcam, bhiri validator, bhiri recycler uye zvichingodaro.
Pakati pemakore anopfuura gumi kutumira kunze kwenyika, bhizinesi redu riri kuwedzera muEurope, Middle East, North America, Southeast Asia, Australia ne Africa. Langxin. Kiosk Zvigadzirwa zvave zvichishandiswa zvakanyanya kunzvimbo dzakasiyana senge hurumende, chikoro, bhangi, hotera, chipatara, bhaisikopo, musika wepamusoro, chitoro chiri nyore, zvitoro, resitorendi, metro chiteshi, chiteshi chebhazi, imba yekuratidzira, miziyamu, nhandare yendege nedzimwe nzvimbo dzeveruzhinji. .
LANGXIN ine yake yehunyanzvi dhizaini timu, R & D timu, timu yekutenga, timu yekugadzira, timu yekutengesa, timu yekuongorora uye mushure mekutengesa masevhisi timu.
LANGXIN nyanya kutarisa kune yakanakisa zvigadzirwa, mhando yekukurumidza uye inodziya masevhisi kune vatengi pasirese.
LANGXIN ane mukurumbira wakanaka kubva mhiri kwemakungwa nokuda kwayo simba kugadzirwa kugona, hwakanaka, uye kwazvo basa. Tine huvepo mune dzinopfuura zana nyika. Sezvo nguva inopfuura, isu tinofungidzira kuwedzera vamwe vagoveri vanoshuva kubatana nesu. Tinokoshesa vatinoshanda navo bhizinesi uye tinoshanda pamwe navo kuwedzera misika yavo uye purofiti. Tiri kutarisira kushanda newe pamwe nekambani yako pane ako emabhangi kana kiosk mapurojekiti uye tine chokwadi chekuti tinogona kuunza budiriro kune zvaunoedza.
Tsanangudzo yako uye mazano anogara achigamuchirwa! Langxin anogara achitsvaga hushamwari pamwe nevatengi pasi rese seyakagovera, mumiriri, OEM, kana ODM sevhisi. Kutarisira kutarisira kuve nekukunda-kuhwina kubatana newe.